Dhageyso :-Kamaal Guutaale oo dhaliilay Jadwalka doorashada Galmudug - Awdinle Online
Dhageyso :-Kamaal Guutaale oo dhaliilay Jadwalka doorashada Galmudug
November 30, 2019 (Awdinle Online) – Kamaal Daahir Xasan (Guutaale) oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Galmudug, ayaa ka hadlay Ciidamada Itoobiyaanka ee la soo sheegayo iney gaareen magaalada Dhuusa-Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Guutaale oo gelinkii danbe ee maanta Suxufiyiinta kula hadlay magaalada Muqdisho, ayaa muujiyay walaaciisa ku aadan sida ay noqon karto doorasho loo adeegsnaayo Ciidamo Itoobiyaan ah, wuxuuna madaxda sare ee dalka xusuusiyay in waxa wax dooranayaa aysan eheyn Ciidankan Itoobiyaanka ee sifaha baalmarsan sharciga ku jooga Caasimadda Galmudug.
“Dowladda waxaan rabaa inaan iraahdo ku kalsoonaada shacabkiina, Ciidamada Itoobiyaanka ma codeyn doonaan, waxaa codeyn doona Xildhibaano Soomaaliyeed oo Odayaalo Soomaaliyeed soo xuleen, Iyagaasaa waxaan leeyahay ku kalsoonaada, Codka ka raadiya, Ciidamo Itoobiyaan ah jujuub iyo caburin Soomaali waa lagu kari waayay, Reer Galmudugna maba ku sii jiraan” ayuu yiri Musharax Kamaal.
Musharaxa Madaxweyne Kamaal Daahir Xasan (Guutaale), ayaa dhinaca kale ku amaanay Hoggaanka sare ee maamulka Ahlu-Suna sida ay u sameeyeen tanaasulaad fara badan, si loo helo maamul ka shaqeeya danaha dadka dega deegaanada Galmudug.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu dhanka kale Madaxda sare ee dalka ka dalbaday iney xal deg deg ah ka gaaraan heshiisyadii Ahlu-Suna loogu soo biiriyay maamulka Galmdug, wuxuuna carabka ku goday in darajooyinka loo xiray Ciidamada oo kaliya ay tahay waxa ka dhaqan galay heshiisyadii dhacay.
Musharax Kamaal Guutaale ayaa ugu danabeyntii dhaliilay Jadwalka doorashada Galmudug ee todobaadkii hore ay soo saareen Guddiga Farsamada ee dowladda u xil saartay Galmudug, isagoo sheegay iney jiraan cabashooyin ka soo yeeraya Hoggaanka Ahlu-Suna iyo beelaha qaaree dega Galmudug.
Dhinaca kale, Xilli murashaxiinta madaxtinimada ee ka socda dhanka mucaaradka iyo madax kale oo diidan maamulka Villada ay qeylinayaan, Nabad iyo Nolol waxaa ay wadataa shaqadeeda, mar hore ayey odeyaashii saxiixayaasha ee Galmudug gudbiyeen xildhibaannadii ay beel walbo qoondo u laheyd, weliba odeyaasha iyo xildhibaannada la gudbiyey waa arrin maamulkeeda ay gacanta ku hayaan saraakiil ay dowladda federaalka ah wadato, oo ka tagay Xamar, mana jirto hufnaan, madaxbannaani iyo la socod kale.
Aqoonyahan, saxafiyiin, Ahlu sunna iyo dadkii aan maanta kala hadlay Dhuusamareeb waxaa ay isku raaceen in Dowladda federaalka ah aaney hadda u baahneynba adeegsiga xoog sidii magaalada Baydhabo ee December 2018, markii aan sababta weydiiyana waxaa uu biya dhaca hadalkoodu ahaa iney muuqato in Villa Somalia ay ku guuleysatay xulista xildhibaanno ku yimid rabitaankeeda, si ay u fuliyaan ujeedka.
Previous articleWaa Maxay Sababta Sacuudiga U Diidan Yahay Safiirka Soomaaliya Ee Loo Magacaabay Dalkaas ?
Next articleXisbiga Himilo oo Qorsheynaya in Magacaabaan Xoghaye Cusub